DOWNLOAD Dornier Do28A-1 Cassic Wings FSX
Modely roa DO-28A-1 sy DO-28A-1S toetra tena tsara amin'ny tontolon'ny 6 sy cocktail tena tsara (VC). Ity motera roa ity dia mora hita ao amin'ny hangaranao.
Ny Making 28 roa-kilaometatra dia novolavolaina tamin'ny 1950 faramparany nifototra tamin'ny Do 27 tokana. Izy io dia natsangan'ny elatra lehibe sy elatra an'habakabaka ary mampiseho ireo fitaovana fampakaran-dàlana sy ny efitranon'ny kabine (olona matory 6) ary ny rambon'ny Do 27. Ny Lyingy sy ny tongotr'ireo fitaovana fitaterana an-dalamby dia nivelatra tanteraka ny vinaingitra. Tahaka ny Do 27, ny 28 dia nanavaka ny haavon'ny haavon'ny haavon'ny haavony, ny fiaramanidina sidina marevaka tsara sy ny endri-tsoratr'i STOL izay efa nomanina vetivety. Ny fiaramanidina voalohany an'ny C 28 A izay misy ny mpivarotra XNEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHUMX dia natao tamin'ny 0 March 540 tao Oberpfaffenhofen. Ny Do 255 B dia nahazo azy, Lycoming IO-20 ho 1960 hp ary propeller telo-bladed. Ny DO 28 C dia dikan-tsafidy valo ambinifolo miaraka amin'ny turboprop 540 hp eo amin'ilay hazo izay tsy vita ny fivoarana. Nisy fiaramanidina 290 A sy B izay nahitana ny fiaramanidina 28. Ny fitaovana sasany dia mbola manidina any Afrika sy Amerika Atsimo.
Nosoratan'i Jean-Marie Mermaz
Nosoratan'i Allied FS Group (AFG)
Downloads 8 430